တံတောင်ဆစ် PB အမျိုးသမီး - China Amico
Fusion Machine နှင့်ဖြတ်စက်
တံတောင်ဆစ် PB အမျိုးသမီး
Amico PB pipes Features 1, Tubing ဓာတုဗေဒစွမ်းဆောင်ရည်သည်တည်ငြိမ်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 2, ပိုမိုကွေးသောပုံသဏ္hotာန်ဖြစ်ဖို့ကွေးဖို့လွယ်ကူခြင်းသို့မဟုတ်အရည်ပျော်ပူခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောချုံ့နိုင်စွမ်းသည်ပိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ ယိုစိမ့်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသိမ်းဆည်းပါ။ ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကြီးမားသော်လည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်းအနှီးကိုကာလတိုအတွင်းပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ။ 4, မြေအောက်အပူဖလှယ်ပြွန်မြင့်သိပ်သည်းဆ polyethylene ပိုက်ကိုအသုံးပြုပါ။ အသက် ၅၀ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း
ပို့ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်း: Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်း
ငွေပေးချေမှုကာလ TT သို့မဟုတ် LC
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Amico သို့မဟုတ် OEM
အရောင်: တောင်းဆိုမှုအဖြစ်, ဆင်စွယ်, Grey က
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ PDF အနေဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Amico PB ပိုက်အင်္ဂါရပ်များ
1, ပြွန်ဓာတုစွမ်းဆောင်ရည်သည်ဤရှုထောင့်အတွက်သတ္တုပိုက်၏မလုံလောက်မှုကိုထေမိ, ချေးခံနိုင်ရည်တည်ငြိမ်သည်။
2, ပိုမိုကွေးသောပုံသဏ္hotာန်ဖြစ်ဖို့ကွေးဖို့လွယ်ကူခြင်းသို့မဟုတ်အရည်ပျော်ပူခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောချုံ့နိုင်စွမ်းသည်ပိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ ယိုစိမ့်ရန်မလွယ်ကူပါ။
၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသိမ်းဆည်းပါ။ ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကြီးမားသော်လည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်းအနှီးကိုကာလတိုအတွင်းပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ။
4, မြေအောက်အပူဖလှယ်ပြွန်မြင့်သိပ်သည်းဆ polyethylene ပိုက်ကိုအသုံးပြုပါ။ အနှစ် ၅၀ အတွက်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။
၅။ ပတ်ဝန်းကျင်လောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိခြင်း၊ အအေးခံကိရိယာများကိုမသုံးရန်၊ အပြင်ဘက်တွင်ချိတ်ဆွဲထားရန်မလိုပါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပူမပေးရ။
အဘယ်သူမျှမအပူစီးကူးအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဆူညံသံ; မြေအောက်ရေအရင်းအမြစ်များကိုမဖျက်ဆီးဘဲမြေအောက်ရေကိုမထုတ်ယူပါနှင့်။ ရိုးရာအလယ်ပိုင်းလေအေးပေးစက်အတွက်လည်ပတ်မှုသည် ၄၀ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။
၁။ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချခြင်း - ဘူမိအပူစွမ်းအင်စနစ်သည်သမားရိုးကျအတင်းအဓမ္မလေထုအပူသို့မဟုတ်အအေးစနစ်များထက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၂၅ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုလောင်ကျွမ်းရန်လိုအပ်သောစွမ်းအင်နည်းပါးခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
၂။ အခမဲ့သို့မဟုတ်စျေးပေါသောရေပူ - အခြားအပူနှင့်အအေးပေးစနစ်နှင့်မတူဘဲဘူမိအပူအပူစုပ်စက်သည်“ desuperheater” ဟုခေါ်သောကိရိယာကို အသုံးပြု၍ အခမဲ့ရေပူကိုပေးနိုင်သည်။
၃။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသက်သောင့်သက်သာရှိမှု - ဆူညံသံအနည်းငယ်နှင့်သင်၏အိမ်တွင်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
၄။ ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း - ဘူမိအပူစွမ်းအင်သုံးစုပ်စက်စနစ်များသည်ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုအတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးအသစ်နှင့်အဆင်အပြင်အခြေအနေများတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
၅။ တိုးတက်လာသောဗေဒ - ဘူမိအပူစွမ်းအင်စနစ်များကိုဖုံးကွယ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အအေးခံမျှော်စင်များမလိုအပ်ဘဲ၊ သမားရိုးကျခေါင်မိုးပေါ်ရှိပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၊ ယိုစိမ့်မှုနှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အလားအလာနည်းပါးသည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောခေါင်မိုးအာမခံချက်များ၊ ခေါင်မိုးလိုင်းများ။
၆။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ကျမှု - စနစ်၏ workhorse အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောပိုက်သည်မြေအောက်သို့မဟုတ်ရေအောက်ဖြစ်သောကြောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။
၇။ Zone Heating and Cooling - ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်အမျိုးမျိုးရှိအဆောက်အအုံ၏နေရာအမျိုးမျိုးကိုတစ်ပြိုင်တည်းအပူ ပေး၍ အအေးပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကွန်ပျူတာခန်းများမှအပူကိုစီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများရှိဆောင်းရာသီအပူအတွက်ပတ်လည်အတိုင်းအတာနံရံများသို့ပြောင်းရွေ့နိုင်သည်။
၈။ ကြာရှည်ခံမှု - ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိခြင်းနှင့်အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွင်း၌အကာအကွယ်ပေးထားသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိသောကြောင့်ဘူမိအပူစွမ်းအင်စနစ်သည်အကြမ်းခံပြီးအလွန်စိတ်ချရသောဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက်သည်သက်တမ်းအနှစ် ၅၀ နှင့်အထက်သက်တမ်းရှိသည်။
Amico သို့မဟုတ် OEM
12.5 ဘား, 16Bar, 20Bar
ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင်အနည်းဆုံးအနှစ် ၅၀ သက်တမ်းရှိသည်
A: Basell မှ ၁၀၀% သန့်စင်ပြီးအသစ်သောကုန်ကြမ်း၊ ပြန်လည်အသုံးမပြုပါ
A: မတူတဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်တယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ရောင်းအားနှင့်စစ်ဆေးပါ။
Q: ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကဘာလဲ? ဒါမှမဟုတ်ပို့ဆောင်မှုအချိန်လား
A: ပုံမှန်အားဖြင့် 40HQ ကွန်တိန်နာတစ်ခုအတွက် ၁၅ ရက်
A: BL Copy သို့မဟုတ် Irrevocable L / C နှင့်ငွေလက်ကျန် ၃၀%၊
မေး : သင်နမူနာအညီထုတ်လုပ်ရန်နိုင်သလား?
ဖြေ။ ။ မင်းရဲ့နမူနာတွေ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပုံဆွဲခြင်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
A: မပို့မှီ ၁၀၀% စမ်းသပ်မှုရှိသည်
မေး - မင်းရဲ့နမူနာမူဝါဒကဘာလဲ။
(၃) ၀ န်ဆောင်မှုသည်အလွန်ကျေနပ်မှုရှိလိမ့်မည်။ ပြproblemsနာများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုအချိန်တိုအတွင်းဖြေကြားလိမ့်မည်။
ယခင်: တံတောင်ဆစ် PB 90
နောက်တစ်ခု - PB Tee
မီးခိုးရောင်အရောင် PB ပိုက်
တံတောင်ဆစ် PB 45
ရေပေးဝေမှုအတွက် Polyethylene ပိုက်
PB3သို့မဟုတ်5အလွှာပိုက်
Address: No68 East Tonghe Road, Luotuo Town, Ningbo, China
ဖုန်းနံပါတ် + 86-574-86590890
ဆဲလ် / wechat / whatsApp: +86 15067406484
©မူပိုင်ခွင့် - 2017: All Rights Reserved ။ - Globalso.com